Hanao Na inona na inona ve ny Cycle of Steroid - BikeHike
Hanao Na inona na inona ve ny Cycle of Steroids
Posted on Oktobra 29, 2021 By Danna
Hafiriana no tokony ho tsingerin'ny steroid voalohany anao?
Hafiriana no ahitanao vokatra avy amin'ny steroïde?
Inona no steroid tsara indrindra ho an'ny vao manomboka?
Inona no steroïde raisin'ny bodybuilders?
Inona no tsingerina steroid tsara indrindra?
Miasa ve ny steroïde nefa tsy miasa?
Ahoana no ahafantaranao raha misy olona mihinana steroïde?
Hatraiza no azonao atao raha tsy misy steroïde?
Inona no mitranga raha mijanona tsy mihinana steroïde ianao?
Steroid ve ny creatine?
Hafiriana no tokony handinihanao ny testosterone?
Mandra-pahoviana ny testosterone enanthate vao manomboka?
Inona no steroid azo antoka indrindra hananganana hozatra?
Inona no atao hoe tsingerina betsaka?
Afaka miara-mitantana ny Tren sy Deca ve ianao?
Mampiasa steroïde ve ny mpanao bodybuilder rehetra?
Afaka mahazo fonosana enina tsy misy steroid ve ianao?
Ahoana no mahatonga ny bodybuilders ho lehibe?
Ahoana no hahazoanao jacked ASAP?
Tsara kokoa ve ny lehibe sa mahia?
Ahoana no ahafahako mahazo abs nopotehina?
Mihinana steroïde ve ny buff dudes?
Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa dia handray steroids mandritra ny enina herinandro ka hatramin'ny 16 herinandro amin'ny fotoana iray, arahin'ny herinandro maromaro amin'ny fihinanana fatra ambany na tsy misy steroid mihitsy. Ireo atleta izay mahafantatra fa hotsapaina izy ireo - ohatra, mandritra ny hetsika na fifaninanana manokana - dia hanara-maso ny tsingerin'izy ireo amin'ny fanantenana ny handalo ny fitsapana zava-mahadomelina.
Ny fahendrena azo dia ny testosterone dia tsy maintsy tsindrona isan-kerinandro mandritra ny 10 herinandro farafahakeliny. Na izany aza, ny mpahay siansa ara-panatanjahantena Robert Weatherby ao amin'ny Southern Cross University any Lismore, Nouvelle-Galles Atsimo, Aostralia, izay nitarika ny fandinihana, dia nahita fa ny fitomboana lehibe indrindra dia tonga taorian'ny telo herinandro monja.
- anavar (oxandrolone) no azo antoka indrindra amin'ny steroïde rehetra ho an'ny vao manomboka, izay malefaka kokoa noho ny testosterone. Ny tombony anavar dia: izany. Satria ny steroid anabolika dia afaka mampitombo ny hozatra, dia mety ho safidy hafa izy ireo. Na izany aza, toy ny steroids am-bava rehetra, dia tena misy poizina aty.
Ity misy lisitry ny sasany amin'ireo steroid anabolika mahazatra indrindra nalaina androany: anadrol, oxandrin, dianabol, winstrol, deca-durabolin, ary equipoise.
Anavar no mety ho steroid tsara indrindra ho an'ny fahaverezan'ny lanja, tsingerin'ny steroid tsara indrindra ho an'ny fako. Anavar dia malaza amin'ny bodybuilders satria miasa toy ny diuretic koa izy ka very rano koa, takelaka steroid tsara indrindra ho an'ny hozatra. Ho an'ireo izay mitady an'io endrika maina sy maina io rehefa eny an-tsehatra ianao, Anavar no tena mety.
Ny steroids anabolic, antsoina koa hoe steroids anabolic-androgenic (aass), dia afaka manangana hozatra sy manatsara ny fahaiza-manao ara-panatanjahantena, saingy mety hisy fiantraikany ratsy lehibe koa izy ireo, indrindra rehefa ampiasaina. Ny steroïde dia hahatonga anao ho lehibe kokoa, haingana kokoa, matanjaka kokoa, ary hampitombo ny asan'ny neuromuscular na dia tsy misy miasa.
Famantarana ny fampiasana steroid moka. Hozatra haingana / fahazoana lanja. Nono nitombo (amin'ny lehilahy) Paranoia. Hyperactivity. Fitomboan'ny volo amin'ny tarehy (amin'ny vehivavy).
FFM: (lanjan'ny vatana x (100 – isan-jaton'ny tavy amin'ny %)) / 100 ∆ Nanatsoaka hevitra izy ireo fa ny atleta tsy mampiasa steroid anabolika dia manana Index manodidina ny 25 amin'ny max. Ny mpampiasa steroid dia mety hihoatra an'io sanda io, matetika amin'ny ankapobeny. Izany dia mitarika ny fiheverana fa ny FFMI manodidina ny 25 dia fetra voajanahary.
Tsy azo ajanona tampoka ny fampiasana steroid; Ny fampihenana ny zava-mahadomelina dia manome fotoana ny fihary adrenal mba hiverina amin'ny fomba mahazatra ny secretion. Ny soritr'aretin'ny fisintonana sy ny famantarana (fahalemena, havizanana, fihenan'ny fahazotoan-komana, fihenam-bidy, maloiloy, mandoa, aretim-pivalanana, fanaintainan'ny kibo) dia mety haka tahaka ny olana ara-pahasalamana maro hafa.
Izy io dia fitambarana asidra amine novokarin'ny atiny sy ny voa ary ny sarakaty. Tsy steroïde ny creatine - hita amin'ny hozatra sy amin'ny hena mena ary trondro izy io, na dia ambany lavitra noho ny endrika vovoka amidy amin'ny tranokala bodybuilding sy ao amin'ny GNC eo an-toerana aza.
Ny fiheverana ankapobeny dia ny fitantanana ny testosterone ho an'ny lehilahy salama sy zokiolona mandritra ny herinandro 52 (taona 1) manaraka ny tsingerin'ny 4 herinandro amin'ny fitantanana testosterone sy ny herinandro 4 tsy misy testosterone (izany hoe, ny fitsaboana isam-bolana) dia hanome tombony mitovy amin'ny tanjaky ny hozatra, hozatra, ary ny hakitroky ny taolana araka ny fenitra.
Ny fampiasana ny testosterone enanthate dia hita fa mampitombo be ny hery ao anatin'ny 6-12 herinandro amin'ny fitantanana (2, 9), na izany aza, tsy fantatra mazava raha miharihary ny tombontsoa ergogenic ao anatin'ny herinandro 6 latsaka.
1) D-Bal avy amin'ny Crazy Bulk Ka tsy mahagaga raha ny D-Bal no fanampin'ny Crazy Bulk be mpividy indrindra. Ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny famoronana zavatra manampy anao hanangana hozatra amin'ny fomba azo antoka sy mahomby no antony hiheveranay fa mendrika ny laharana voalohany amin'ny lisitray ny D-Bal.
Voalohany, ny tsingerina bulking mahomby indrindra amin'ny ankapobeny dia farafahakeliny 3-4 volana, raha tsy ela kokoa. Ny mety ho sarotra ho an'ny olona sasany dia ny hoe na dia eo an-tampon'ny macronutrients aza ianao, dia azo inoana fa hahazo tavy ihany koa ianao rehefa mahazo hozatra amin'ny tsingerim-bolana.
Afaka atambatra amin'ny Tren ve ny Deca? Eny, azo antoka fa afaka ary misy vokany tsara rehefa bulking. Hampitomboina ny habeny sy ny tanjaka raha oharina amin'ny fandehanana tren irery. Ny voka-dratsiny ihany koa dia tsy ho henjana kokoa, raha oharina amin'ny fanaovana tsingerin'ny tren-only (ankoatra ny fanafoanana ny testosterone).
Na dia toa mahazatra indrindra aza ny fampiasana amin'ireo mpanao fanatanjahan-tena mifaninana - ny 54 isan-jaton'izy ireo dia mandray steroïde, ny fandinihana iray dia hita - zara raha voafetra ho an'io mponina io.
Afaka manangana hozatra sy mihalehibe ve aho raha tsy misy steroïde? Eny ny valiny. Na izany aza, raha toa ka mitombo be ny mpampiasa steroïde na inona na inona karazana fampiofanana ataony, ny mpanangana voajanahary dia mila mijery akaiky kokoa ny fomba fanazaran-tenany, inona ny fanampin-tsakafo ampiasaina ary ny fomba / fotoana hisakafoana.
Miaraka amin'ny fanazaran-tena fohy kokoa nefa mafimafy kokoa ary fotoana bebe kokoa ho an'ny fanarenana, dia tsy manao fanazaran-tena izy ireo, fa manome fotoana bebe kokoa ny hozatra hialana sasatra sy hitombo. Ny vokatr'izany dia ny bodybuilders izay afaka manatratra ny tanjaky ny fototarazony amin'ny fampivoarana ny vatana sy ny bikany.
Torolàlanao feno amin'ny fanalana ny dingana 1: Fiofanana tanjaka hananganana hozatra. Dingana 2: Hetezo ny kalôria ho very tavy. Dingana 3: Mihinàna Proteinina Ampy. Dingana 4: Mihinàna tavy ara-pahasalamana antonony. Dingana 5: Andramo Carb Cycling. Dingana 6: Ampiasao ny fanaraha-maso ny ampahany. Dingana 7: Manampia High-Intensity Interval Training (HIIT) Dingana 8: Matoritory.
Ny vatana mahia dia tsara kokoa noho ny vatana be dia be noho ireto antony ireto: Mora malefaka kokoa, manome endrika tononkalo ho anao. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny fahaverezan'ny tavy ivelany mba hampisehoana ny hozatra ao ambaniny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra momba ny tombontsoa ara-pahasalaman'ny karazana vatana roa ianao, ny fomba hahazoana azy ireo ary izay tianao.
Ireto misy fomba tsotra 8 hahatongavana haingana sy azo antoka enina-pack abs. Manaova Cardio bebe kokoa. Zarao amin'ny Pinterest. Ampiharo ny hozatry ny kibonao. Ampitomboy ny fihinananao proteinina. Andramo ny fanofanana amin'ny elanelana mahery vaika. Mijanona ho rano. Atsaharo ny fihinanana sakafo voavoatra. Atsaharo ny karbônina voadio. Fenoy ny Fibre.
Ny fampiasana steroïde dia tsy voafetra ho an'ny olon-dehibe. Betsaka ny bandy kely no mihinana steroïde mba hiezaka hijanona ho tapaka sy hahazo hozatra mahia.
Ahoana ny fomba cycle steroïde
Ny fiantraikan'ny steroid amin'ny tsingerin'ny fadimbolana
Fanontaniana: Mandra-pahoviana no hihodina steroïde
Valiny haingana: Ahoana ny fampandehanana ny steroïde soa aman-tsara
Valiny haingana: Mety hisy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny fadimbolana ve ny Steroid
Afaka manova ny tsingerin'ny fadimbolana ve ny Steroid
Fanontaniana: Sarobidy ve ny Cycle Trader
Valiny haingana: Manao ahoana ny vidin'ny tsingerin'ny steroïde
Fanontaniana: Hafiriana no ahafahanao mivezivezy amin'ny steroïde
Hafiriana ny 1 tsingerin'ny steroïde
Fanontaniana: Hafiriana no tokony hialanao amin'ny steroïde
Ohatrinona ny tsingerin'ny steroid
Previous Post: Fanontaniana: Nahoana no atao hoe cycle ny cycle rock
Next Post: Fanontaniana: Hanakorontana ny tsingerinao ve ny Plan B
Fanontaniana: Hisy Boky Fahadimy ve Ao Amin’ny Tsingerin’ny Fandovana
Valiny haingana: Hisy ve ny Cycle 25 an'ny Antm
Hamerina ny tsingerin'ny torimasoko ny fijanonana mandritra ny alina
Fanontaniana: Hanampy ny bisikiletako ve ny hazakazaka
Fanontaniana: Hanakorontana ny tsingerinao ve ny Plan B
Fanontaniana: Hanimba anao ve ny tsingerin'ny Testosterone iray
Hankarary anao ve ny tsingerina iray amin'ny steroïde
Hitombo ve ny tongotro avy amin'ny bisikileta